तीन वर्षभित्र द्रुतगतिको आर्थिक वृद्धि गर्ने देश : प्रधानमन्त्री «
तीन वर्षभित्र द्रुतगतिको आर्थिक वृद्धि गर्ने देश : प्रधानमन्त्री
प्रकाशित मिति : श्रावण ९, २०७५ बुधबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई तीन वर्षभित्र तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धि गर्ने देशहरूको लहरमा पु-याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेकपा निकट प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर आबद्ध पत्रकारहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले सुशासन र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढेको बताउँदै ओलीले भने, “यो वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्छौ । तीन वर्षभित्र तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धि गर्ने देशहरूको रूपमा नेपाललाई पु-याउँछौं ।”
पर्यटन क्षेत्रका आँकडाहरू उत्साहित हुने खालको भएको बताउँदै उनले यसलाई अझ बढी विस्तार गर्ने योजनालाई अगाडि बढाइरहेको जनाए । “नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँको कृषि क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ, त्यसबारे इजरायललगायत विभिन्न देशको अध्ययन गर्न पठाएर नीति बनाउन लगाउने काम भइरहेको छ । इजरायलमा हाम्रोजस्तो मलिलो र उब्जाउ भूमि नभए पनि त्यहाँको दुई प्रतिशतले गर्ने उत्पादनबाट देशभर खान पुग्ने गरेको छ । हामी त्यसो गर्न सक्छौं । हामीले कृषिमा आधारित जनसंख्यालाई घटाएर अर्को क्षेत्रमा क्रियाशील गर्नेछौं ।”
प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस निर्वस्त्र भएर हाम्रा विरूद्ध लागेको बताउँदै उनले भने, “सरकार हटाउन पाइँदैन भन्ने होइन, पाइन्छ । तर त्यसका लागि विधि र प्रक्रिया छ । हामीले मिलेर बनाएको संविधान छ । चुनावबाट हटाउन मिल्छ ।”
केहीले बुर्का लगाएर सरकारलाई लखेट्ने काम गरिरहेको टिप्पणी गर्दै उनले केहीले बुर्का हटाएर गरिरहेको बताए । आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने नेपाली कांग्रेस यति चाँडो निर्वस्त्र भएर आउँछ भन्ने आफूलाई नलागेको उनको भनाइ थियो । नेपाली कांग्रेससँग राजनीतिक एजेन्डा नभएर अनसनमा रहेका डा. केसीको मुद्दा बनाएको बताउँदै उनले भने “कांग्रेससँग एजेन्डा छैन् । कांग्रेसको जुलुश फैलिँदै छ भन्ने लागेको होला । कांग्रेसका ७७ जिल्लामा संगठन छ । ती सबै जिल्लामा कांग्रेस देखिए भनेर चिन्ता मान्नु पर्दैन ।”
सोही कार्यक्रममा पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुनियोजित तवरले सरकामाथि हमला गर्न थालेको बताए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा १०.२९ अर्ब
बोलो नेकपा एमालेकी जय !!
शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा चौबीसे गाउँपालिका
सुर्खेत – नेपाली कांग्रेस केन्द्रमा शेरबहादुर देउवा र पौडेल समूह जस्तै कर्णालीमा भने महामन्त्री पूर्णबहादुर
युवा लक्षित कार्यक्रम एकै ठाँउ केन्द्रित गर्नुपर्छ : मन्त्री गहतराज
युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वराज गहतराजले युवा लक्षित कार्यक्रमलाई एकै ठाँउ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्
राप्रपा अध्यक्षमा लिङ्देन र महामन्त्रीमा राणाको उम्मेदवारी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीको आसन्न एकता महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी
एमाले दसौं महाधिवेशनको तयारी पूरा
नेकपा (एमालेंले १०औँ महाधिवेशनको तयारी सम्पूर्ण रुपमा सकिएको बताएको छ । बिहिबार नारायणी नदी किनारमा
कांग्रेसमा रुपान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि मेरो उम्मेदवारी : निधी
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधीले कांग्रेसमा रुपान्तरण र पुस्तान्तरणको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नको लागि पार्टी सभापतिमा
महिलालाई राजनीतिक रुपमा सक्षम बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लैङ्गिक उत्तरदायी शासन पद्दतिको विकास गर्दै महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा सक्षम